Mmekọrịta nke a n'ọbá akwụkwọ bụ okike nke a oyiri gị playlist ọzọ nchekwa ọkara. IPhone ngwaọrụ nwere ike ijikọ na ndị ọzọ iTunes ọba akwụkwọ, na-edegharị ihe faịlụ ka ngwaọrụ ọzọ ma ọ bụ Anglịkan. E nwere ụfọdụ ihe ndị na-kwesịrị iwere na akaụntụ mgbe mmekọrịta ọba akwụkwọ.
Mekọrịta n'ọbá akwụkwọ faịlụ na-atụfu ụfọdụ data
Ọ bụ a nkịtị nke na etịbe ka ọtụtụ ndị mgbe ha na-mmekọrịta iTunes ọba akwụkwọ. Oge ọ bụla na onye ọrụ ejikọ ya ngwaọrụ na kọmputa ihe ozugbo ozi na-egosi na Ị chọrọ ihichapu a iPhone na mmekọrịta na nke a iTunes n'ọbá akwụkwọ? Ọ bụrụ na mmadụ retara, ndị niile data na bụ ya bụ na iPhone ga-efu. Iji zere ime ka adịkwa nke data otu kwesịrị iji a ọzọ ngwa ebe ọ bụ na apple nanị na-enye ohere ọrụ gakọrịta otu n'ọbá akwụkwọ na a laa.
Achọghị ọ bụla data nke ọzọ iTunes n'ọbá akwụkwọ
Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ ga-jikọọ ha ngwaọrụ ha PC na-enweghị ihe ọ bụla n'uche nke mmekọrịta n'ọbá akwụkwọ faịlụ. Ọ bụ ezie na ọ dị mkpa iji mekọrịta ngwaọrụ gị, ma mmekọrịta niile data nwere ike ịbụ mgbe ụfọdụ na-enweghị isi otu onye nwere ike chọrọ họrọ onye faịlụ n'ime a nchekwa na ha nwere ike ịmekọrịta. A ga-eme tumadi site anagide na pasting faịlụ na ị chọrọ gakọrịta. Usoro na otu onye ga-eso ga-n'ụzọ ụfọdụ ọrụaka, ma nwere ike ịbụ mfe ka mmadụ maara na iPhone ngwaọrụ.
Achọghị ka mmekọrịta ụfọdụ data nke iPhone ọzọ iTunes n'ọbá akwụkwọ
Mgbe a ngwaọrụ na jikọọ na ndị ọzọ media otu onye nwere ike ikpebi na ha agaghị zipu ma ọ bụ enweta ihe ọ bụla faịlụ n'oge mmekọrịta nke ngwaọrụ otu onye nwere ike chọrọ imelite sistemụ otú otu onye nwere ike ikpebi na ya agaghị mekọrịta. Otu nwekwara ike iji atọ ọzọ na ngwaahịa na ga-enyere ha ịrụ ọrụ ahụ ha chọrọ na-enweghị mkpa mmekọrịta.
Mmekọrịta iPhone ọzọ na iTunes n'ọbá akwụkwọ
Otu nwere ike ịhọrọ SD kaadị na-eme ihe dị ka ndabere mmekọrịta ụzọ faịlụ kpọfere android ngwaọrụ. Otu ga-achọrọ na-eso ndị a dị mfe nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Pịa na mwube on TunesGo.
Nzọụkwụ 2. Mgbe ahụ họrọ mpụga SD na mmekọrịta n'ọdụ ụgbọ mmiri ọnọdụ, mgbe ahụ, ịzọpụta mgbanwe.
Ọ bụghị a kwesịrị na otu ahọrọ mpụga SD na-eme ihe dị ka ndabere ụzọ mgbe n'ịrụ mmekọrịta. Onye ọrụ nwere ike ịhọrọ họrọ android n'ozuzu dị ka ụzọ, onye ọrụ ga-achọrọ ka:
Nzọụkwụ 1. Họrọ Ntọala na TunesGo mgbe malite ngwa.
Nzọụkwụ 2. Input niile okporo ụzọ nile nke nchekwa na na-ebu ọ bụla faịlụ na mmekọrịta Path panel.
Apple-enye ohere ya ọrụ iji mekọrịta naanị otu ngwaọrụ na iTunes n'ọbá akwụkwọ. Iji TunesGo adịghị agụnye ogologo usoro aka ngwaọrụ ndị ọzọ ka mmekọrịta n'adịghị agbalị aka; otu ga-mkpa-eso nke a dị mfe usoro:
Jikọọ TunesGo na ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ ị nwere na ị pụrụ Toggle ha na gị ụtọ. A onye ga-enwe TunesGo ma na zuru version ma ọ bụ ikpe mbipute mere na ha nwere ike igosi na ọrụ.
Olee otú rescan na idozi iTunes n'ọbá akwụkwọ
> Resource> iTunes> Olee iPhone mmekọrịta ọzọ na iTunes n'ọbá akwụkwọ